Madzimai Okurudzirana Kuvhoterana Musarudzo
Kurume 06, 2018
Madzimai anoti aneta nekusaenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi kunyanya munyaya dzematongerwo enyika nekudaro achange achitora matanho akasiyana-siyana kuti varwire kuenzaniswa kwemikana iyi.
Madzimaiatsidza kuti achange achitsigirana kuti madzimai akawanda akunde musarudzo kuitira kuti azadzikise zviri mubumbiro remitemo yenyika zvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi.
Vachitaura pamusangano wekuparura hurongwahwematanho avachatora mukurwira kuenzaniswa kwemikana wavari kuti 50/50 Advocacy Campaign and Women’s Manifesto, mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Women’s Parliamentary Caucus, Amai Paurina Mpariwa-Gwanyanya, vati nekuda kwekuti vakadzi ndovakawanda pavanhu vachanovhota, vari kuzokuridzirana kuvhoterana.
Amai Mpariwa vatiwo vachaumba homwe yekubatsira madzimai achange achitsvaga rutsigiro rwekupinda mune zvematongerwo enyika sezvo vachiti kushaya zvekutsvagisa rutsigiro zviri kudzorera madzimai kumashure.
Mumwe mudzimai ari munezvematongerwo enyika, Amai Priscilla Misihairabwi Mushonga, vati vachashandisa matanho akasiyana siyana kusanganisira kuenda kumatare pamwe nekutaura nevakuru vemapato ezvematongerwo enyika mukurwisa kuti vakadzi vapiwe mikana yakaenzana nevanhurume sezvakatarwa nebumbiro remutemo wenyika.
Madzimai aparurawo gwaro rehwaro hwezvavanozokwanisa kuitira vavhoti kuti vasimbise kuwana rutsigiro. Amai Mushonga varumbidza gwaro iri vachiti richabatsira madzimai kuti vazive zvekunotaura pavanenge vachitsvaka rutsigiro.
Muzvare Maureen Kademaunga vesangano reHashtag SheVotes2018 vati vafadzwa zvikuru nehwaro hwaparurwa nhasi nekuti zvichabatsira madzimai akawanda kuti awane pekutangira mukutsvaga rutsigiro kunyanya avo vari kukwikwidza kekutanga.
Madzimai ane huwandu hunosvuka pazvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana. Sangano rinoona nezvesarudzo rinotiwo pavanhu vakanyoresa kuzovhota, madzimai ndiwo akawanda asi nguva zhinji varume ndivo vanokunda musarudzo.